မျက်ကွင်း ညိုခြင်းဟာ တကယ်တော့ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်လုံးနားက အသားအရေဟာ မျက်နှာ ပြင်ရှိ တခြား အသားအရေ များထက် ပိုပြီးတော့ ပါးလွှာပါတယ်။ မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်မှာ အာဟာရပြု ထောက်ပံ့ နေတဲ့ သွေးကြောလေးတွေကအင်မတန်သေးငယ်ပြီး အဲဒီဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးတွေ ထဲမှာရှိတဲ ဟေမိုဂလိုဘင်(Hemoglobin)
များပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလာဒ်တစ်ခု သာဖြစ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မျက်လုံး ပတ်လည်ကို ထိခိုက်မိခြင်း
( ဥပမာ - လက်သီးဖြင့်အထိုးခံရခြင်း) တို့တွင် သွေးကြောများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် မျက်လုံး ပတ်ပတ်လည်မှာ အညိုအမဲ စွဲနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံး ပတ်ပတ်လည်ရှိ အရေပြား များမှာ အင်မတန် နူးညံ့ပြီး ပါးလွှာ လွန်းတဲ့အတွက် အနည်းငယ် ထိခိုက်မိရုံနဲ့ ညိုအမဲစွဲနေ နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးတ၀ိုက်တွင် ထိခိုက် မခံရ ပေမယ့်လည်း မျက်ကွင်း ညိုခြင်းဟာ အောက်ပါ အကြောင်းအရာ များကြောင့် ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။
အထက်တွင် ပြောခဲ့သလိုပဲ မျက်ကွင်းညိုခြင်းဟာ စိုးရိမ်စရာ ရောဂါတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ မျက်နှာတွင်ဖြစ်ပေါ် နေခြင်းကြောင့်သာ အလှအပအတွက် အနည်းငယ် စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်ပေမယ့် မျက်ကွင်းညိုခြင်းဟာ လူကို ဒုက္ခပေးတဲ့ ရောဂါ တစ်ခုတော မဟုတ်ပါဘူး။ မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို သက်သာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေး တွေလည်းရှိပါတယ်။
ရေများများသောက်ပေးပါ။ တနေ့လျှင် အနည်းဆုံး ဖန်ခွက်ကြီး ၈ ဖန်ခွက်မှ ၁၀ ဖန်ခွက်အထိသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ခြင်းဖြင့် အသားအရေကို စိုပြေစေပါတယ်။ မျက်စိကို လက်နဲ့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မပွတ်မိပါစေနဲ့။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အအေးခံထားသောသခွါး သီး၊ ဒါမှမဟုတ် အာလူးကို အခွံနွှါ၍ အကွင်းလိုက်ပါးပါးလေးလှီးပြီး မျက်စိပေါ်တွင်တစ်နေ့ လျှင်၁၅ မိနစ်ခန် တင်ထားပေးပါ။ တခါသောက် (Ready made)လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်လေးများကိုလည်းလွှင့်မပစ်ဘဲ ရေခဲသေတ္တာတွင် အအေးခံပြီး မျက်စိပေါ်တွင် တင်ထားပေးနိုင်ပါ တယ်။ထောပတ် ဆီသို့ မဟုတ် သံလွင်ဆီကို မျက်စိဘေးပတ်လည်တွင် ညင်သာစွာပွတ်လိမ်းပေးပါ။ vitamin E ကဲ့သို့သောကရင်မ် များကိုလည်း မျက်လုံးပတ်လည်တွင် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ပါ။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်အိပ်ရေး ပျက်ခြင်းကြောင့်လည်း မျက်တွင်းချိုင့်ပြီး မျက်ကွင်းညိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ဖို့လည်းလိုအပ် လှပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေးပါစေ။ ကွန်ပျူတာရှေ့၊ တီဗွီရှေ့တွင် တထိုင်တည်း အချိန်အတော်ကြာမထိုင်မိပါစေနဲ့။ မျက်လုံးကို မကြာဏ အနားပေးပါ။ မျက်စိကို နောင်ရောင်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့ပါစေနှင့်။နေရောင်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် အရေပြားတွင်ယ်လနင် (melanin)များပိုမိုထွက်ရှိနိုင်ပြီး မျက်ကွင်း ညိုခြင်းကို ပိုမို ဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းသော အသီးအနှံများနှင့် လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုများများစားပေးပါ။
Posted by မြန်မာ့သတင်းများစုစည်းရာ at 23:48
ဆရာမ။ ။လွပ်လပ်ရေးစာချုပ်ကို ဘယ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြတာလဲ? တပည့်။ ။စာချုပ်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာပါ။ Credit to ကိုပဲလေး
လုပ်ငန်းအပြီးသတ်ဖို့ နောက်ဆုံးရက် တွေ၊ ငြင်းရခုန်ရတာတွေ၊ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့တာတွေ အားလုံးကခေါင်းကိုက်စေမယ့် အကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သင...
သန္ဓေတားခြင်း နည်းလမ်းပေါင်း များစွာရှိပါသည်။ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် သန္ဓေတားမည်ကို ဆုံးဖြတ်သော အခါ မိမိ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ လိင်ဆက်ဆံသည့် အကြ...
ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာဆေးမှ စားစရာ မလိုပဲ တကယ် ဝိတ်ချလို့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းများကို လုပ်နိုင်ဖို့ တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။...
ညသန်းခေါင်ချိန်ဖြစ်၍ ပတ်ဝန်း ကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေ၏။ ကြီးမားလှသော ခရေပင်ကြီးမှ တောင်လေအဝှေ့တွင် ခရေပန်းတို့ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေကျလာ၏။ ခရေ...
မြန်မာပြည်ကတင် မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ Facebook user တော်တော်များများ သိချင်တဲ့ မေးခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့  က ကိုယ့် Profile ...
ဖြူဖြူကျော်သိန်း -မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲနေတယ်
01. ချယ်ရီလမ်း 02. နောက်ဆုံးအချိန် 03. သတိထားကြ
မနည်း ကြိုးစားနေပေမယ့် သင်မှန်းထားသလောက် ဝိတ်မလျော့လာဘဲ ဖြစ်နေသလား။ ဝိတ်လျော့ချင် သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်း ရှိပါတယ်။ သုတေသန ပညာရှင်တွေရဲ...
ပျိုပျိုမေတို့အတွက် အထူး အဟာရ သဘာဝအစားအစာ
ကင်ဆာ ရောဂါ အတွက် ဒူးရင်းသြဇာ..............
ဦးနှောက်အကြောင်း သင်မသိသေးသော အချက်များ..............
‎"Google မှ Email ပို့သည်ပုံစံအားပြောင်းလဲ
Photo ထဲတွင် File များကို Hidden လုပ်နည်း